Yaa u qalma Kabtan-nimada Kooxda Liverpool oo Su'aal la geliyay? %
Yaa u qalma Kabtan-nimada Kooxda Liverpool oo Su’aal la geliyay?
By Laacib News	 On Dec 12, 2018
Laacib Sports : Kulankii adkaa ee xalay la ciyaaray kadib ayaa Liverpool oo garoonkeeda Anfield ku martigelisay Napoli ku adkaatay 1-0 ay ugu gudubtay wareegga 16-ka iyadoo kasoo baxday Group-kii dhimashada oo kaalinta koowaad ay xoog ku qaadatay PSG, halka Napoli ay Europa League ka ciyaari doonto sanadka soo socda.
Ciyaartii xalay Sida muuqatay Henderson waxa uu ku heystay saaxiibkii qaabkii uu kubadda ugu qabtay Mertens iyo halistii uu geliyey ee sababi gaaray inuu kaarka cas ku baxo, hase yeeshee difaaca reer Holland oo halbowle u ahaa guusha kubbado badanna difaacay ayaan ku waafaqin fikirka kabtankiisa.
Hadalka uu yiri ayaa ahaa ” Naadiag Liverpool marna uma qalmo inuu kabtanka u qaato kooxda Liverpool, booska koowaadna helo.” Sidaa waxa soo qoray Adekunle Oluwatobi E, laakiin qof kale oo isticmaala magaca Pivoting Back to Stoicism ayaa waxa uu soo qoray: “Jordan Henderson maaha in loo ogolaado inuu la murmo Vigil Van Dijk. taas ayaa keentay in muran xoogan uu galo kabtanka Kooxda Liverpool.
Liverpool FC - Champions LeagueYaa u qalma Kabtan-nimada Kooxda Liverpool
Tottenham Oo Bar-Baro Ku Qabatay Barcelona Una Soo Baxday Wareega Xiga & Inter Milan Oo Ka Hartay Champions League iyo natiijooyinka kale Champions League-ga
Falanqeynta kulanka Manchester United iyo Valencia iyo wararkii ugu dambeeyey